Maika ny fitoriana - Mana isan andro
MAIKA NY FITORIANA FILAZANTSARA
» Fa hianao kosa mahonona tena amin’ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan’ny evanjelista, tanteraho ny fanompoanao » II Timoty 4.5
Miara mahita sy miaina isika ety ambanin’ny masoandro fa mihatanteraka ny Tenin’ ny Soratra Masina : » Aoka ho fantatrao fa any amparany dia hisy andro mahory, fa ny olona ho tia tena … » II Timoty 3 : 1-9 izay midika fa efa miharatsy izao fiainana izao.
Vahaolana tokana omen’ny Tenin’ Andriamanitra manoloana izany ny Fitoriana tsy misy hatak’andro ny Filazantsara satria :
– Io no hafatry ny Tompo farany alohan’ny handaozany ity tany ity izay azo lazaina ho sarobidy indrindra hoe Mandehana dia mitoria ny Filazantsara … (Matio 28.19-20)
– Ny Filazantsara no Herin’ Andriamanitra manafaka sy mamonjy ny olona ao anaty ny fahotana (I Korintiana 1.18)
– Raha manana an’i Jesosy Kristy ao ampony ny olona iray dia Tsy azon’ny devoly vonovonoina etsy sy eroa izany satria zanak’ Andriamanitra, mety handalo olana fa tsy ho resin’ny olana.
– Farany : Ny olona rehetra afaka mitory filazantsara fa ny Tena afaka mampita fiainana sy mahomby dia izay miaina ny fiainan’i Kristy marina ( S’identifier à Christ ).
Te hiteny Paoly tamin’i Timoty zanany ara-panahy hoe raha mandà ny tenanao ianao sy miaritra tahaka ny niaretako dia hahavokatra ary hahataona fanahin’olona maro ho an’ny Tompo.
Ry havana, miandry antsika ny Tompo ary te hahita vokatra amin’ny alalanao Izy. Indro efa masaka tokony hojinjaina ny fanahin’olona maro fa mila olona vonona handà tena sy hiaritra vao ho tanteraka izany. Ny Fanahy Masina anie hanampy anao sy hanainga anao ho Mpamafy ilay voa tsy mety lo ary Matokia fa handray valim-pitia avy amin’izany ianao.
Mahereza ao amin’ny Tompo sy ny Herin’ny faherezany !